Zeziphi iintlobo kwinqanaba somoya
ngomphathi ku 20-01-09
1 .. Classification ngokwimiselo yokusebenza (1) kwinqanaba umoya Mechanical kwinqanaba Mechanical kungenziwa zohlulwa ngokwendidi ezintathu: inqanaba bar (eyaziwa ngokuba kwinqanaba nempilo), inqanaba isakhelo nomgangatho qela. Bona kuboniswe kwinqanaba bubble, ngoko kwinqanaba mechanical nayo ngokuba Inqanaba okanye kwiqamza typ ...
inqanaba umoya isebenza njani
Ityhubhu izinga kwinqanaba umoya yenziwe yeglasi. Udonga engaphakathi ityhubhu nqanaba umgangatho egosogoso kunye oyi ethile amagophe. Ityhubhu iqulethe ulwelo. Xa mgangatho axis, amadlu kwi kwinqanaba tube ukuya ekupheleni inqanaba ukugqiba indawo inqanaba. I elikhulu ...
Zeziphi iindlela ukuhlolwa na inqanaba?
A level sisixhobo yokulinganisa ofanayo umlinganiselo iiengile ezincinane. Kumashishini ngoomatshini kunye isixhobo imveliso, lisetyenziswa ukulinganisa utyekelo Angle kuthelekiswa kwindawo tyaba, le planeness kunye tye guide kaloliwe kwezixhobo isixhobo ngomatshini, ukuma tye ...
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Hot Products - eKhaya - AMP Mobile
Station Iyonke , Vh-525 Five Line , Wall sigaba , umfumani , enemilenze emithathu , 8 Line Ke 4 umgca oxwesileyo ,